တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr. Sun Guoxiang အား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
နေပြည်တော်၊ ဇန်န၀ါရီ – ၂၂
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr. Sun Guoxiang အား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် အစိုးရ နှင့်တပ်မတော်မှ ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေမှု အခြေအနေများ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ တပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ချက်ကို တရုတ်နိုင်ငံမှထောက်ခံသည့် အခြေ အနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများက နယ်ခြားစောင့်ရဲကင်း စခန်းများအား တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းသည် လက်မခံနိုင်စရာ တာဝန်မဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်၍ တရုတ်နိုင်ငံမှ ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချသည့် အခြေအနေ များအား ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းထွန်းဦး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အာရှရေးရာအထူး ကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang၊ စစ်သံမှူး Senior Colonel Xiong Shaowei နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၏ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျ H.E. Mr. Sun Guoxiang အား ယနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံတှငျထာဝရငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျအတှကျ အစိုးရ နှငျ့တပျမတျောမှ ဆောငျရှကျနမှေုမြားနှငျ့ တရုတျနိုငျငံမှပါဝငျကူညီဆောငျရှကျပေးနမှေု အခွအေနမြေား၊ ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ ၂၁ ရကျနေ့ တပျမတျောကထုတျပွနျခကျြကို တရုတျနိုငျငံမှထောကျခံသညျ့ အခွေ အနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး AA အကွမျးဖကျ သောငျးကနျြးသူမြားက နယျခွားစောငျ့ရဲကငျး စခနျးမြားအား တိုကျခိုကျခဲ့ခွငျးသညျ လကျမခံနိုငျစရာ တာဝနျမဲ့လုပျရပျဖွဈ၍ တရုတျနိုငျငံမှ ပွငျးထနျစှာရှုတျခသြညျ့ အခွအေနေ မြားအား ရငျးရငျးနှီးနှီး ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး သနျးထှနျးဦး၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျော အရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၏ အာရှရေးရာအထူး ကိုယျစားလှယျနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာတရုတျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Hong Liang၊ စဈသံမှူး Senior Colonel Xiong Shaowei နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်(လေ)၏ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှု(၇၂)နှစ်မြောက် လေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်များ တပ်တော်ဝင်အခမ်းအနားကျင်းပ